Uncwadi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Inkcazelo emfutshane kaRyleyev, imbongi, isibalo sabantu, u-Decembrist
URyleev Kondraty Fedorovich, i-biografi emfutshane eza kuxutyushwa ngezantsi, ishiye uphawu olumangalisayo kwimbali yaseRussia kunye noncwadi. Wayeqhelene kakhulu no-A.S.Pushkin no-A.S.Griboyedov, kodwa ubudlelwane babo babusekwe ...
V.P. IAustafiev, "iVasyutkino Ichibi": ngamaphepha omsebenzi
UVP Astafyev ngomnye wabameli abanomdla kakhulu kuncwadi lwaseSoviet. Kwakungento yelize ukuba bambiza ngokuba ngumlinganiso wesazela kunye nokuziphatha kwexesha lethu. Umntu nendalo, indoda nemfazwe, ubomi belali, i-ecology ...
UArthur Conan Doyle, Ihlabathi elilahlekileyo. Isishwankathelo
Uninzi lwabafundi, uArthur Conan Doyle ngumbhali wamabali abecuphi kunye notata wokubhala kumcuphi uSherlock Holmes. Kodwa kwiakhawunti yakhe kukho eminye imisebenzi, nangona ingathandwa njenge ...
Qaphela, i-synquain: imizekelo yokusetyenziswa kwisiNgesi kunye nezifundo zoncwadi
Indlela yale mihla yokufundisa iinkalo zezifundo ifuna ukuba isifundo sigcwaliswe ngezinto ezinokuqondwa kangangoko kunokwenzeka, ukuze umfundi angathathi kuwo kuphela ipesenti yolwazi kunye nolwazi, kodwa nezakhono kunye nezakhono. ...
Isishwankathelo se "The Queen Queen" nguHans Christian Andersen
Kwizizukulwana ezininzi zabafundi, eli bali lihlala kwaye lihlala lingoyena uthandwa kakhulu. Isishwankathelo se-"Queen Queen" ngumbhali wase-Danish u-Hans Christian Andersen unokuphinda abhalwe nangowuphi na umntwana kunye nabantu abadala, enkosi uninzi ...
"Ingcuka ebuhlanti." Intsomi ngu-IA Krylov
Olu hlobo loncwadi njengentsomi lwavela kwiminyaka engama-4000 eyadlulayo. Ibali elihlekisayo elinomtsalane ngokuqinisekileyo liqulathe umbono ophambili-isimilo. Olu hlobo luziswe kuncwadi lwaseRussia kwaye lwavuselelwa nguIvan Andreevich Krylov. Ukuba…
"Iseyile eyedwa iyakhazimla": isishwankathelo kunye nohlalutyo lombongo wakho owuthandayo
Alithandabuzeki elokuba, M. Yu.Lermontov yenye yezona zakudala zibalaseleyo zemibongo yaseRussia kunye noncwadi ngokubanzi. Ubuchule bakhe begama, imibongo yemigca kunye nosizi olungenakulinganiswa kwibinzana ngalinye zixutywe kukonwaba ...
A. Pushkin, "Ukuvuma": Uhlalutyo lombongo
UAlexander Sergeevich Pushkin wabhala "Ukuvuma izono" eneminyaka engama-27. Lo mbongo wanikezelwa kwenye yeemvumi zakhe ezininzi - Alexandra Osipova. Njengabanye abantu abaninzi bokudala, uPushkin wayenomdla ogqithisileyo ...
Uhlalutyo olunzulu lwesihobe. IBalmont "Umlomo"
UConstantin Balmont wayedume ngokumangalisayo ngexesha elinye. Isizukulwana esincinci, esasithanda ukuhlalutya kunye nokubonakalisa, sasithanda kakhulu imibongo yakhe. Imisebenzi yeBalmont izaliswe luthando kunye ne-lyricism, zizaliswe luthando kunye nolutsha ...
UAndrey Usachev - umbhali wabantwana, umbongi kunye nomlobi weprose
U-Andrew Usachev ngumbhali wabantwana, imbongi kunye nombhali weprozi. Uvele kwizangqa zoncwadi ngamaxesha anzima, xa kwenziwa yonke imibongo elungileyo kwaye zonke iingoma zabhalwa. Omnye umbhali kwi ...
UMnu Yu Lermontov. Inyaniso enomdla ebomini bombhali
Kwisizukulwana esingaphezulu kwesinye sabantu abathanda uncwadi lwaseRussia, ubomi bukaMnu Yu Lermontov bunomdla. Amanye amaxesha akhe ahlala efihliwe. Kwaye uninzi lweziganeko, ukuba zigutyungelwe, ke ...
I-Blaginina Elena: i-biography kunye nokudala
Elena Blaginina, engobomi leyo enxulumene ngokusondeleyo nehlabathi ebuntwaneni, - imbongi odumileyo Russian kunye ngumguquleli. Ngaphezulu kwesinye isizukulwana esitsha sikhulele kumbongo onobubele kwaye onyanisekileyo wombhali, imixholo yemisebenzi yakhe icacile ...
Umbongo "Ihlathi ekwindla" - uTvardovsky wabhala umsebenzi wobugcisa omncinci
Imbongi ebalaseleyo yaseRussia uA. UTvardovsky wasindisa imisebenzi emininzi elungileyo. Ukuza kubantu abaqhelekileyo, wakwazi emsebenzini wakhe, njengoSergei Yesenin, ukuhambisa bonke ubuhle bendalo yaseRussia ngendlela elula eyahlukileyo ...
"The Adventures of Captain Vrungel": isishwankathelo. "The Adventures kaCaptain Vrungel" ngezahluko
Ibali elihlekisayo ngohambo olumnandi lukaKapteni Vrungel laqanjwa ngumbhali weSoviet u-Andrei Sergeevich Nekrasov. Ibali eli linezahluko ezingamashumi amabini anesibini. Ziqulathe ulwazi umdla isixelela adventures umatiloshe onamava. Utitshala…
IBorodino. ILermontov M.Yu. Uhlalutyo lombongo
Ngethuba lobomi bakhe obufutshane, uMikhail Lermontov wabhala inani elikhulu lemisebenzi eqaqambileyo emangalisa ngobuhle besilabhili kunye nobunzulu bentsingiselo. Imbongi ibisoloko incoma izinto ezimbini: ubuhle bendalo kunye nokulula kunye nokunyaniseka kwabantu baseRussia. Ngoko ke…
UVoznesenskaya Julia Nikolaevna: I-biography, iyasebenza
Indlela yobomi yalo mfazi engaqhelekanga - imbongi, umbhali kunye nomthunywa wevangeli - yayingelula. Ukongeza kwiziganeko eziqhelekileyo, incwadi yobomi bukaYulia Voznesenskaya iqulethe iphepha elinzima njengeenkampu kunye neentolongo, ukuvuma izono ...
A. Pushkin "IiGypsies": Uhlalutyo lombongo
Ekusebenzeni kwakhe kwangoko, uAlexander Sergeevich wayehlala ekopa iingcinga zikaByron noRousseau. Aba babhali babe zizithixo kwimbongi enkulu yaseRussia, kodwa ixesha lokuthandana ladlula, kwaye kwathi gqi iingcinga ezintsha ...
"Murzuk" Bianki - isishwankathelo sebali
Wabhala ibali "Murzuk" nguBianki. Isishwankathelo siya kumazisa umfundi ngalo msebenzi unomdla. Ibali liqala ngendawo esehlathini. Umzingeli Umbhali wazisa umfundi komnye wabalinganiswa abaphambili- indoda endala uAndreevich ...
Yesenin, "Inja yeKatchalov": indalo yanikezelwa kubani? Sityhila imfihlelo yenkulungwane
Imbongi enkulu yaseRussia kunye nentandokazi yabasetyhini uSergei Yesenin wazalwa ngo-1895, ngoSeptemba 21, isitayile esidala. Yintoni le yatsala abantu besini esahlukileyo kuye? Okokuqala, kunjalo, imbonakalo engenakuphikiswa ...
UJames Aldridge, Inch yokugqibela. Isishwankathelo sebali
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 16.12.2019
UJ. Aldridge wabhala Inch yokugqibela kwisitayile sakhe. Umbhali wayekholelwa ukuba eyona nto iphambili kumenzi womsebenzi kukutyhila indlela umntu abunjwe ngayo, ukubamba umzuzu wokujika kwabantwana babe ngamantombazana ...
Page 1 Page 2 ... Page 104 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,486.